Facebook ကို Login လုပ်ငန်းစဉ် | Facebook အခုနှစ်မှာသင်္ကေတပြ – အပြီးအစီးလမ်းညွှန်
သင့်ရဲ့ Facebook အကောင့်ကိုမှဝင်မည် တကယ်တစ်ဦးအလွန်ရိုးရှင်းပြီးလွယ်ကူခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ဖြစ်ပါသည်. သငျသညျကိုအောင်မြင်စွာသင့်ရဲ့ Facebook အကောင့်ကိုဖန်ဆင်းပြီးတဲ့နောက်များအတွက်နောက်ထပ်လုပ်ငန်းစဉ်ကိုအပြီးသတ်ဖို့ဤဆောင်းပါးတွင်ရည်ညွှန်း Facebook ကိုဝင်မည်. ဒါပေမဲ့, သင်သည်သင်၏ Facebook အကောင့်ကိုဖန်တီးကြပြီမဟုတ်ပါလျှင်နှိပ်ပါ ဒီမှာ ပထမဦးဆုံးသင့်ရဲ့အကောင့်ကိုဖန်တီးရန်.
ဤဆောင်းပါးသည်ငါအလွန်ရိုးရှင်းတဲ့ဘာသာစကားကိုသုံးပြီးဖန်တီးကိုလည်းရန်ခြေလှမ်းလုပ်ထုံးလုပ်နည်းအားဖြင့်ခြေလှမ်းကိုအသုံးပြုဖို့ပါပြီ Facebook အခုနှစ်မှာသင်္ကေတပြ. သငျသညျကိုသာအလွယ်တကူသင့်ရဲ့ Facebook အကောင့်ကို log in ဖို့ခြေလှမ်းအတိုင်းလိုက်နာကြောင့်ဖြည့်စွက်ရန်ရှိသည်.
မြေတပြင်လုံးကိုနားလည်သဘောပေါက်ရန်ဤဆောင်းပါးကိုဂရုတစိုက် Read Facebook ကို Login လုပ်ငန်းစဉ်. သင်သည်သင်၏လိုအပ်ပါတယ် username နှင့် Password ကို သင့်ရဲ့ရန် login မှ Facebook အကောင့်ကို. ဒါကြောင့်အတူကိုယ့်ကိုကိုယ်အဆင်သင့်ရအောင်မြင်စွာသင့်ရဲ့ Facebook အကောင့်ကို log in ဖို့ဆောင်းပါးအတိုင်းလိုက်နာ.
Facebook ကိုဝင်မည် | အဆင့်လမ်းညွှန်ချက်အားဖြင့်အဆင့်
အဘို့ခြေလှမ်းဖြစ်စဉ်ကိုအားဖြင့်အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောဖော်ပြချက်ပြည့်စုံခြေလှမ်းထုတ်စစ်ဆေး Facebook ကအကောင့် Login. ဖော်ပြခဲ့တဲ့အတိုင်းခြေလှမ်းကိုလိုက်နာပါနှင့်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းဖြည့်စွက်.
ဤနေရာတွင်ကလစ်နှိပ်ခြင်းဖြင့်တရားဝင် Facebook စာမျက်နှာမှ Enter: www.facebook.com
ယခု, ဂရုတစိုက်ပေးအာကာသ၌သင်တို့၏အီးမေးလ်သို့မဟုတ်ဖုန်းနှင့် Password ကဒီမှာရိုက်ထည့်ပါ.
ပြီးနောက်မှန်ကန်သောသတင်းအချက်အလက်များစာနယ်ဇင်းတက်ဖြည့်ပါ “လော့ဂ်အင်” ကြယ်သီး.
ယခု, သင်သည်သင်၏ Facebook အကောင့်ကိုမှဝင်ပါလိမ့်မယ်.
ယခု, သငျသညျကို Facebook ၏အင်္ဂါရပ်အားလုံးရနိုင်.
ဤဆောင်းပါးသည်သင့်အကြောင်းကိုအကောင်းဆုံးလမ်းညွှန်ပေးသွားမှာပါ Facebook ကို Login လုပ်ငန်းစဉ်. အောင်မြင်စွာဖို့ခြေလှမ်းပုံစံအားဖြင့်တစ်ဦးခြေလှမ်းအတွက်ပြီးပြည့်စုံသောလုပ်ငန်းစဉ်ကိုဖော်ပြထားခြင်းကိုလိုက်နာပါ Facebook Account အားခုနှစ်တွင်နိမိတ်လက္ခဏာ. သငျသညျကို Facebook ပေါ်တွင်သင်၏အလုပ်ဖြည့်စွက်ပြီးနောက်လုံခြုံရေးရည်ရွယ်ချက်များအတွက်ကိရိယာမှ log out လုပ်ဖို့သေချာအောင်.
အောက်ကဖော်ပြထားမှတ်ချက် box ကို အသုံးပြု. ဤဆောင်းပါးနှင့် ပတ်သက်. သင့်ရဲ့ထင်မြင်ချက်ကိုမျှဝေရန်, သင်သည်မည်သည့်စုံစမ်းမှုကိုရှာဖွေလျှင်လည်းကျွန်တော်တို့ကိုမှတ်ချက်ပေး. နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ website မှာ get www-hotmail-com.email ပိုပြီးပုံမှန် update များအတွက်.
အောက်မှာ Filed: လော့ဂ်အင် အတူ Tagged: facebook ရဲ့ login ဖြစ်စဉ်ကို, လုပ်ငန်းစဉ်အတွက် facebook ကိုနိမိတ်လက္ခဏာ, facebook ကို login ဖို့ဘယ်လို